Australia vs Zimbabwe - 4th Match, Group A - Australia won by 91 runs
Sports Cricket Australia vs Zimbabwe - 4th Match, Group A- Australia won by 91 runs
Australia vs Zimbabwe - 4th Match, Group A- Australia won by 91 runs
Sardar Patel Stadium, Ahmedabad on 21 February 2011 (Time: 09:00 GMT | 14:30 IST)
Check out the live scores of Australia vs Zimbabwe cricket ICC World Cup 2011 match. You can catch the latest updates of Australia vs Zimbabwe cricket match which is played on 21 February 2011, Sardar Patel Stadium, Ahmedabad. Get Australia vs Zimbabwe ball to ball summary of the match and world cup highlights. Australia vs Zimbabwe is scheduled at 14:30 IST.
Also catch up with the full scoreboard of the teams Australia and Zimbabwe to get the best analysis of the match. Click Here for ICC Cricket World Cup Points Table
Australia 262/6 (50 overs) ICC World Cup 2011
Zimbabwe 171/10 (46.2 overs) Australia won by 91 runs
Brendan Taylor (c) b S Tait 16 24 1 0 66.67
Regis Chakabva (wk) lbw J Krejza 6 18 0 0 33.33
Brad Haddin (wk) lbw P Utseya 29 66 3 0 43.94
Ricky Ponting (c) runout (C Mpofu) 28 36 0 0 77.78
Michael Clarke (c) not out 58 55 4 0 105.45
Cameron White (c) b C Mpofu 22 36 0 0 61.11